HomeDUNIDAAFRIKA243 CongoShilalka tareenka ee Congo, ugu yaraan 50 dad ayaa naftooda ku waayey
13 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 243 Congo, AFRIKA, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline 0
ugu yaraan shil tareen oo ka dhacay congo
Sida ku xusan warbixinnada bilowga ah, ugu yaraan dadka 50 ayaa ku dhintey shilka oo dhacay subaxnimadii markii tareenka uu ku xarooday gobolka Tanganyika ee koonfur-bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo.
Wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo xigatay Wasiirka Arimaha Bini’aadannimada Steve Mbikayi isagoo sheegay in shilka uu ka dhacay magaalada Mayibaridi seddexdii subaxnimo. Mbikayi wuxuu sheegay in ugu yaraan 50 qof ay ku dhinteen shilka, dadka 23 ay ku dhaawacmeen oo loo qaaday isbitaal.
Twitter waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii dadkii ku dhintay shilka aniga oo ku hadlaya magaca dowladda waxaan rajeynayaa hamigeenna ah in aan dhaafiyo kuwa dhaawacmay, ayuu Wasiirku ku yiri Twitter.
Wadooyinka tareenka ee Koongo si fiican looma ilaaliyo, oo meelaha ugu hooseeya ayaa lagu dhisay 1960s. Sababtaas awgeed, shilalka ka dhaca gaadiidka tareenka ayaa sababa dhimasho aad u daran.
Qof kale ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay Kahramanmaraş 08 / 07 / 2014 Qof kale ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay Kahramanmaraş: 3 ayaa ku dhaawacmay shilka halkaas oo qof lagu dilay iyadoo ay sababtay tareenka xamuulka qaada ah oo ku burburay isgoysyada. Tareenka xamuulka qaada oo ka soo jeeda Adana ilaa Malatya, xaafad 4 Turkoglu ah oo ku taal xaafadda Yenikoy oo maalintii ka horeysa, Salih Doğramacı'nın ayaa gaari ku burburtay Besey Aksin (70), waxaa lagu daweeyey Isbitaalka Necip Fazil Hospital. Mustafa Aksen ayaa ku dhintay shilka, Salih Doğramacı, Yuusuf Baran Doğramacı, 8 sano jir iyo Besey Aksen ayaa dhaawacmay.
Qof ayaa ku dhintay shil shaqo oo ku yimid TÜLOMSAŞ 26 / 02 / 2013 Qof ayaa geeriyooday shil shaqo oo ka dhacay TULOMSAŞ Eskişehir oo ka shaqeynaysay shaqada baabuur jarjaraha ayaa si xun u dhaawacmay ka dib saameynta qaybta jaban, noloshiisii ​​way lumisay. Sida laga soo xigtay warbixin ka helay, Quarter Hoşnudiye ee Turkey tareenka iyo Engine Industry xaaqiijiyay Ahmet Wing Street (TÜLOMSAŞ) Saraçoğlu'nda shaqaalaha Hussein (53), waxaa ku dhacay qaybo ka jareen inta lagu guda jiro ee argtida baabuur ah. Dhaawac aad u daran Saraçoglu, kooxo 112 ah ayaa ka baxay Isbitaalka Jaamacadda Eskisehir Osmangazi ee Isbitaalka Jaamacadda Esgisehir, inkastoo dhimashadii uu geeriyooday. Waxaa laga soo xigtey: www.haberciniz.biz
Rize gaari telefishan ah oo lumay qof la qabtay xilligan 23 / 08 / 2014 Qof ayaa lumiyay noloshiisa Rize Cable Wire Tel: Rize ee Degmada Cayeli oo ka tirsan tuulada Karaağaç waxay ku xirnayd wadiiqada telefishinka oo lumiyay noloshii da 'yar. Xaaladdan oo ka dhacday Xaafada Neighborhood, ayaa hoos ugu soo dhacaya inuu la shaqeeyo qoyskiisa Ismaaciil Gurxan (16), iyada oo shaaha culus ee gadaashiisa uu doonayay inuu dhex maro baabuurta fiilada ee beerta. Waxa uu doonayay inuu kor u qaado baabuurta cable, oo loo yaqaan 'Seerma', isagoo gacanta ku haya. Dhalinyarada nasiib darada ah ayaa qoyskiisa u soo celiyay Isbitaalka Gobolka Caydi Iskoologaal, inkastoo dhammaan waxqabadyada halkan lagu sameeyey, Ismaaciil ayaa naftiisa ku waayey daadkii korontada.
Qofka dhintay ee tareenku wuu dhintay 18 / 06 / 2012 Munaasabadan ayaa, HalkalıTareenka magaalooyinka ee jidka Sirkeci ayaa ka dhacay saacado 17.45 ka dib markii uu ka soo wareegay xaruntii 1 ee laga soo gooyay xaruntii Kucumacmece. Darawalka tareenka, shilkii kadib, ayaa joojiyay tareenkii, ayuu hoos u dhacay oo jejebiyay ninkii dhallinyarada ahaa ee ogaaday noloshiisa. Waxa uu ugu yeeray 155 khadka dhibanayaasha booliiska wuxuuna ku wargeliyay kooxaha bilayska. Ogaysiis ka socota kooxaha bilayska ee jooga goobta iyagoo qaadaya tallaabooyinka amniga ee ku saabsan jirka oo dib u eegay. Natiijada baaritaanka, waxaa la go'aamiyay in qofka aan lahayn aqoonsi aqoonsi uu yahay lab ah da'da 24. Kadib shaqada ka socota kooxaha bilayska ee leh aaska aaska ee ka tirsan Dawladda Hoose ee Istanbul ka dib markii ay 3 saacadood
Ankara Elvankent, tareenka xawaaraha sare ayaa ku dhuftay qof dhintay 23 / 12 / 2012 Tareenka Ankara Elvankent, Ahmet Tire (54), oo ka soo laabtay dukaanka raashinka, ayaa naftiisa ku waayey isagoo hoosta tareenka xawaare sare leh uga yimid Eskisehir isaga oo maraya waddada tareenka. Dadka deggan xaafadda, oo ah meesha kaliya ee ammaanka ah ee gobolka ku yaala ee ka tallaabaya dhinaca galbeedka ayaa ka buuxsamey biyo, sidaa daraadeed dadka lugeynaya ayaa la kulma dhibaatooyin, ayuu yidhi. ASKI, inkasta oo ay ugu yeereen dadka deggan dhulka hoostiisa oo ku andacoonaya in biyaha aan la faaruqin, waxay muujiyeen sida ay uga jawaabayaan shilka. Xigasho: HaberTurk
Gawaarida Qarniga Soo Bandhigay Matxafka Erzurum Gar Museum Waxay Farsamaysaa Taariikhda
Faa'iidooyinka Gaadiidka ee Erzurum wuxuu ku yaal Waddada Silk Taariikhiga ah
Rize gaari telefishan ah oo lumay qof la qabtay xilligan
1 dad ayaa naftooda ku waayey isgoys ka dhacay Aydın